Tag: QM | Sagal Radio Services
QM “Qaban qaabiyeyaasha & maal-galiyayaasha Al Shabaab waa in la helaa”
Golaha amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa si weyn u falanqeeyay weerarada xoogeysanaya ee Al Shabaab la eegayaan fariisamaha AMISOM ku leeyihiin gobolada dalka Soomaaliya.
QM: ugu yaraan 150 askari ayaa KDF looga dilay Ceel-cadde
QM ayaa warbixin ay dhawaan soo saartay waxay ku sheegtay in ugu yaraan 150 askari ciidamada Kenya ee KDF looga dilay Ceel-cadde koofurta Soomaaliya bishii kowaad ee sanadkaan.
Golaha Ammaanka oo cunaqabateyn ku soo rogaya Jabhada Xuutiyiinta Yemen
Sagal Radio Services • News Report • April 14, 2015
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa lagu wadaa inay u codeeyaan qaraar ogolaanaya in cunaqabateyn dhinaca hubka ah lagu soo rogo Jabhada Xuutiyiinta Yemen, kuwaasoo dagaal kula jira dowladda tabarta yar ee ay taageerayaan Xulufada uu Sacuudiga hogaaminayo.
Qaramada Midoobay oo Codsatay Lacago lagu caawiyo Malaayiin Somali ah
Qaramada Midoobay ayaa dalbatay 863-milyan oo doollar oo si deg-deg ah loogu caawinayo 2.7 milyan qof oo Soomaali ah oo u baahan gargaar deg-deg ah sida uu sheegay afhayeenka Qaramada Midoobay, Stéphane Dujarric.
Qaramada Midoobey oo ka digtay in Cudurka Ebola uu ku faafo Caalamka
Qaramada Midoobey ayaa ka digtay in Cudurka Ebola uu ku faafo Caalamka intiisa kale, kadib markii bilihii la soo dhaafay ay cudurkan ugu geeriyoodeen kumanaan ruux dalal ku yaal Galbeedka Afrika.
QM”oo ogaatay in Ciidamada Kenya ay ku lugleeyihiin dhoofinta dhuxusha Soomaaliya.”
New America Media • News Report • October 26, 2014
Safiirka dowlada Ingiriiska ee Qaramada Midoobay Mark Layal ayaa sheegay in ciidamada dowlada Kenya ay ku lug leeyihiin ganacsiga sharci darada dhuxusha Soomaaliya.
Qaramada Midoobay ayaa soo dhaweysay shirka dib u heshiisiinta ee shalay ka furmay degmada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose, kaas oo ay ka qaybgalayaan ergooyin kala duwan.
Qaramada Midoobay oo ka digtay in mar kale ay Somalia ka dillaacdo Macluul
Qaramada Midoobay ayaa dalalka deeq-bixiyeyaasha ah ka dalbaday inay gacan ka geystaan sidii macluul Somalia ka dilaacda looga hortegi lahaa, ayna bixiyaan dhaqaalihii lagu badbaadin lahaa dadka ku nool deegaannada ay abaaruhu ka jiraan.
Weerar ka dhacay Mombasa iyo Al-Shabaab oo lagu Eedeeyey
daka deegaanka xaafada likoni ee magalada Mombasa ayaa warbaahinta usheegay in rag hubeesan oo watay mooto ay soo weerareen xaafada islamarkaana auy dileen kudhawaad 4-ruux in kabadana ay dhaawaceen.
Golaha Ammaanka ee QM oo si adag Cambaareeyay dilkii Xildhibaan Xayd
Xubnaha golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa si xoogan u cambaareeyay dilkii xildhibaan, Maxamed Maxamuud Xayd oo Khamiis shalay ahayd loogu geystay Muqdisho, dilkaas oo ay mas’uuliyaddiisa sheegatay Al-shabaab.
Qaramada Midoobay oo sheegtay inay Kenya ka caawinayso la dagaalanka Argagaxisada
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay, Ban Ki-Moon ayaa sheegay inay ka go’an tahay inay ka caawiyaan Kenya iyo dalalka kale ee Afrika dagaalka lagula jiro argagaxisada oo weerarro taxane ah oo khasaare badan geystay ku qaaday Kenya.
Qaramada Midoobay: Soomaaliya waxay u baahan tahay $60 milyan
Sagal Radio Services • News Report • June 5, 2014
Qaramada Midoobay ayaa dalbatay gurmad dhaqaale oo degdeg ah si wax looga qabto xaalad bini’aadannimo oo ka jira Soomaaliya.
Qaramada Midoobey oo ka digtay Abaarta Soomaaliya iyo xaalado nafaqdaro
Qaramada Midoobey ayaa ka digtay xaalad abaareed oo ku soo fool leh Soomaaliya, kadib markii la soo wariyay in boqolaal kun oo ruux inay u baahan yihiin gargaar deg ah.
QM oo mar kale ka digtay qatarta ka Imaan karto Maleeshiyaadka Shabaab
Sida lagu daabacay wakaalada wararka Ee Washitong Post,xukuumada Washitong ayaa shaacisay in Hanjabaadaha iyo Qatarta Ururweynaha Al-Qaa’ida iyo Laamaha Xiriirka la Leh ay sii kordhayaan,waxaana Mareynkanka uu ka digay in Jiil Cusub ay ku Biiraan Al-Qaa’ida ama ay soo baxaan.
Qaramada Midoobay oo ka hadashay nin lagu toogtay magaalada Kismaayo
Xafiiska Qaramada Midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa codkooda ku biiriyay in la joojiyo toogashada degdegga ah kadib markii magaalada Kismaayo shalay lagu toogtay nin dhalinyaro ah oo lagu eedeeyay in uu sagaal maalmood kahor diley mid kamid ah oday dhaqameedyada gobolada Jubbooyinka.
Danjire Kay oo ka dayriyay xaaladda ammaan ee Magaalada Muqdisho
Ergayga Qaramada Midoobay ee arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay oo kaga qaybgalay khadka taleefoonka kulan ay xubnaha golaha ammaanku ku yeesheen magaalada New York ayaa sheegay inay xalaadda Muqdisho kasoo darayso.
Xaalada dagmada Baardheere oo kacsan iyo Ciidamada Huwanta ah oo ku sii siqaya.
Q. M. Oo cambaareysay Weerarkii Argagixiso Ee Shalay Ka Dhacay Muqdisho
Golaha amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa cambaareeyay falkii argagixiso oo shalay maleeshiyaadka Al-shabab ka geysteen Muqdisho.
Qaramada Midoobey oo ka digeysa abaar mar kale ku dhufata qeybo katirsan dalka Somaliya
Hay’adda cunnadda iyo beeraha u qaabilsan Q,M ee marka magaceeda lasoo gaabsho la yiraahdo FAO ayaa warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in dad tiradoodu gaarayso 857,000 ooo ruux oo Soomaaliya ku nool ay u baahanyihiin cunno deg deg ah in la gaarsiiyo haddii kale ay wajahayaan xaalad adag oo bini’aadanimo
QM oo ka doodeysa waqti u kordhinta AMISOM
Sagal Radio Services • News Report • November 6, 2012
Kaaliyaha xog-hayaha arrimaha dibadda Mareykanka uqaabilsan dhinaca siyaasadda Wendy Sherman, ayaa sheegtay in golaha ammaanka ee QM ka doodayaan u cusbooneysiinta waqtiga AMISOM ay Soomaaliya joogayaan.